Ukuhamba kukaGulliver: iklasi yoncwadi lwehlabathi | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I fantasy, Imbali yoncwadi, Inoveli
Uhambo lukaGulliver yinto ehlekisayo, ethathwa njengowona msebenzi ubalaseleyo obhalwe ngumntu waseIreland uJonathan Swift. Yapapashwa ngo-Okthobha u-1726 kwaye ukusukela ngoko ukuthandwa kwayo kukhokelele ekubeni yinto yakudala kuncwadi lwehlabathi. Umbhali wenza isicatshulwa njengesiqhulo "samabali okuhamba", esongeza ukugxeka okunamandla kumasiko, iindlela zopolitiko, kunye nendalo yomntu.
La inoveli ngayo egcwele intelekelelo Ngokuchukumisa uburharha kunye nokucinga, ngenxa yesi sizathu, uninzi luthatha ukuba ngumsebenzi wabantwana. Umlinganiswa ophambili kweli bali li ULemuweli gulliver, ugqirha othi, ngenxa yeemeko ezithile, athathe isigqibo sokuthatha uhambo. Kuhambo lwakho lonke uya kuphila kamnandi kwaye uya kudibana neenkcubeko ezine ezikhethekileyo, ezahluke kakhulu kwezakho.
1 Isishwankathelo sohambo lweGulliver (1726)
1.3 Uhambo lwesibini
1.4 Uhambo lwesithathu
2 Uphengululo lobomi lombhali
2.1 Izifundo kunye nemisebenzi yokuqala
2.2 Uhlanga loncwadi
2.2.1 Imisebenzi kaJonathan Swift
Isishwankathelo se Uhambo lukaGulliver (1726)
Uhambo lukaGulliver ...
Yincwadi yenoveli apho kukhutshwa khona iihambo ezine zoogqirha, odiniweyo sisiqhelo, wagqiba kwelokuba aqalise ukonwaba. Lo msebenzi ludidi lweencwadi Kwaye yahlengahlengiswa kumaxesha amaninzi, zombini ifilimu, umabonwakude, unomathotholo kunye nemidlalo. Kwakhona, ababhali abohlukeneyo benze ukulandelelana ebalini, kunye nohambo olutsha nguLemuel Gulliver odumileyo.
ULemuel Gulliver ngugqirha Ugqirha otshatileyo onabantwana, Nottinghamshire oyinzalelwane. Yena Uya kwenza iihambo ezine apho aya kuhlala khona engakholelekiyo e umdla umdla. Kulowo nalowo uya kuphelela kwisiqithi esahlukileyo, apho uya kudibana khona neenkcubeko ezine. Oku kuyakwenza ukuba ubonakalise ngalo lonke ixesha ubuyela eNgilane kwaye ubuze yonke into ngobomi bakho.
NgoMeyi 1699, Gulliver Uqala uhambo lwakhe lokuqala, yeyiphi iqala kwi-Antelope. Emva kwesaqhwithi esinamandla, inqanawa iyatshona kwaye uLemuweli kufuneka adade ngokungakhathali de kufuneke umhlaba oqinileyo. Emva kokuhamba emanzini anesiphithiphithi, uyakwazi ukufikelela elunxwemeni, apho alala khona ngenxa yomzamo omkhulu owenziweyo. Umlinganiswa ophambili uvuka ebotshiwe kwaye engqongwe ngabantu abancinci: abemi baseLilliput.
Umhala olandelayo, UGulliver udibana nomlawuli wesiqithi, avelana naye kwaye ufumane ukuzithemba. Kulula kuye ukuziqhelanisa; ngokukhawuleza bafunde ulwimi olutsha kunye namasiko. Ugqirha wamthanda umlawuli kangangokuba Ugqiba kwelokuba amkhulule, kodwa umphathi (engazange amamkele) bonisa yonke into, Ukuze ukukhululeka kwesigebenga kuxhomekeke kwiimeko ezithile, ezingamvumeli ukuba abuyele ekhaya.
Njengoko ixesha lihamba, kuqhambuka imfazwe phakathi kweLilliputians kunye nobukumkani baseBlefuscu. -Kwanabemi abancinci. Ngeendleko zobukhulu bayo obukhulu, UGulliver uthimba inqwelomoya yotshaba, emfumana isihloko sembeko. Emva kokwala ukujika iBlefuscu ibe yithanga laseLilliput, uLemuel uzatsiba phakathi kwamacala ade abenakho ukubuyisela isikhephe esilingana naye abaleke ngaso abuyele eNgilane.
Kwiinyanga ezimbini emva kokubuyela kusapho, UGulliver ugqiba kwelokuba aqale uhambo olutsha, ngeli xesha kwi-Adventure. Kwakhona, isaqhwithi sibangela ukuba inqanawa iphulukane nendlela yayo kwaye iphele ishiyekile kwisiqithi saseBrobdingnag. Apho wonke umntu ubona umntu omkhulu, owenza ukuba abasebenzi babaleke ngoloyiko, ngelixa uLemuweli ebalekela ebaleni.
Ukubakho, Umfama omde ngama-22 eemfama uthimba iGulliver ukubonisa njengomtsalane wesekisi. Ulungiselela ukumsa kuKumkanikazi, owathi kwangoko afune ukuhlala naye njengesilwanyana sasekhaya. Ukuba kwibhotwe, uLemuweli uza kudlula kwiingozi ezininzi ngenxa yesayizi yakhe encinci. Ngombulelo kwimeko engakholelekiyo, uya kukwazi ukufikelela elwandle, ukuze kamva ahlangulwe yimikhosi yesiNgesi.
Kwiinyanga kamva-ziqhutywa ziingxaki ezithile zosapho-, UGulliver ugqiba kwelokuba ahambe kwakhona. Ngeli xesha, inqanawa ihlaselwa ngabaphangi xa bebaleka izakuphelela kwilizwe elingaziwayo. ULemuweli uhamba nommandla, xa ngequbuliso umgquma isithunzi esikhulu, xa ejonge esibhakabhakeni. fumana isiqithi esidadayo ngaphezulu kwakhe. Emva kokucela uncedo, amanye amadoda alahla intambo aze akwazi ukunyuka.
Esi siqithi simangalisayo sabizwa ngokuba yiLaputa, kolu luntu yonke into iphathwa ngomculo nakwimathematics. Kungekudala uGulliver uyadinwa kolu luntu lungaqhelekanga kwaye acele ukubuyiselwa emhlabeni., apho atyelele khona uBalnibarbi iintsuku ezimbalwa. Okokugqibela ugqiba kwelokuba abuyele eNgilane, edlula eGlubbdubdrib ngaphambi kokundwendwela umlumbi, ukongeza ekudibaneni nezinto ezingafiyo ezibizwa ngokuba zii-struldbrugs.
UGulliver uthathe isigqibo sokuhlala eNgilane kwaye angaphinde ahambe kwakhona. Emva kwexesha lokukruquka, Ugqibe kwelokuba abuyele elwandle, ngeli xesha engukapteni wenqanawa. Kungekudala emva kokuhamba ngomkhumbi, Uvukelo phakathi kwabasebenzi lwakhokelela ekubeni uLemuweli aphoswe kwisiqithi. Apho uya kudibana nempucuko emibini eyahlukeneyo: iYahoos kunye neHouhnhhnms, eyokugqibela ngabo balawula intsimi.
IYahoos ngabantu abahlala endle, ihlala ingcolile kwaye, ukongeza, ayinakuthenjwa. Ngenxalenye yayo, iihouyhnhnms ziyathetha amahashe, unengqiqo kwaye wenza ngokusekelwe kwisizathu esivakalayo. I-Gulliver idibanisa ngokugqibeleleyo nale mpucuko, kwaye mihla le iyandonyanyisa kuluntu; nangona, ekugqibeleni-ngokuchasene nentando yakhe-ubuyiselwe eNgilane.
Uphengululo lobomi lombhali
NgoLwesithathu, Novemba 30, 1667, kwisiXeko saseDublin (Ayalend) wabona ukuzalwa kuka umntwana ebhaptiziwe njengo UJonathan Swift. Abazali bakhe yayingu-Abigail Erick noJonathan Swift, bobabini bengabaphambukeli abangamaNgesi. Kungekudala ngaphambi kokuba azalwe, utata wakhe wasweleka, esenza ukuba umama wakhe abuyele eNgilane. Kodwa ngaphambi kokuba ahambe, eli bhinqa lahamba ukukhuliswa nguYonatan uphethe kuMalume Godwin.
Izifundo kunye nemisebenzi yokuqala
Wafunda ukubulela kumalume wakhe, kuba iminyaka yakhe yokuqala wayiphila kwintlupheko egqithileyo. Wafunda kwisikolo saseKilkenny kwaye wafumana isidanga seBachelor yoBugcisa kwiKholeji yaseTrinity, eDublin.. Ngo-1688 wabuya nomama wakhe eNgilane, apho, ngenxa yakhe wakwazi ukusebenza njengonobhala wombhali oliNgesi kunye nosopolitiki uSir William Temple, owayesisizalwane esikude kwanomhlobo kamalume wakhe uGodwin.
Ngokugcina imisebenzi yakhe njengendawo ephezulu yeTempile yeBaronet, Waqhubeka nezifundo zakhe zaseyunivesithi kwaye wamiselwa njengomfundisi waseTshetshi ngo-1694. Ediniwe kukuba mncinci kwaye enganyuselwa, wagqiba kwelokuba abuyele eIreland athathe i-Kilroot parish. Ngo-1696, wabuyela eMoor Park - eqinisekisiwe yiTempile - ukulungiselela iimemori zakhe kunye neeleta ngaphambi kokupapashwa.
USwift wasebenza noSir Temple de kwasekufeni kwakhe ngo-1699. Ngaleyo minyaka uzuze amava abanzi kwezopolitiko, ezenkolo kunye noncwadi yesixeko, eyamkhokelela ekubeni abe ngumntu obalulekileyo kwaye onempembelelo. Kwakhona, kwi Ngelo xesha wabhala umsebenzi wakhe wokuqala, Idabi phakathi kweencwadi zakudala nezangoku, eyapapashwa kamva ngo-1704.
Ke inkcazo yesicatshulwa sakhe sokuqala, kwakuloo nyaka Waqala ngokubhala ngokuhlekisayo kwincwadi yakhe yesibini: Imbali yebhafu (1704). Usebenze njengomhleli oyintloko kwiphephandaba Mviwo, apho wapapasha amanqaku aliqela axhasa urhulumente weTory, awayengumcebisi wakhe ukusuka ngo-1710 ukuya ku-1714.
Ngo-1726 wazisa ngokungachazwanga into eyayiza kuba ngumsebenzi wobugcisa kuye: Uhambo lukaGulliver. Oku kwamkhokelela ekubeni abe yenye yezona zinto zibalulekileyo ehlabathini. Ngale ngcamango yefilosofi, U-Swift wenza i-parody yeencwadi zokuhamba Ixesha elithandwayo, apho abhala khona isitayile esingalunganga esichaza imisebenzi yakhe emininzi.
Imisebenzi kaJonathan Swift
Idabi phakathi kweencwadi zakudala nezangoku Izimvo eziyi-1697
Ibali lomgqomo (1713)
Isindululo esithobekileyo (1729)
Ukususela ngo-1738 uSwift waqala ukubandezeleka sisifo esingaqondakaliyo, ekucingelwa ukuba yimithambo-luvo kwindalo. Ngo-1742, ithumba elamehlo lenza ukuba angakwazi ukufunda. Xa wayeziva ukuba uswelekile, wathi: "Ixesha lifikile lokuba ndiqhekeze neli hlabathi: ndiza kufa ndinomsindo, njengempuku enetyhefu emngxunyeni wayo."
UJonathan Swift wasweleka ngo-Okthobha 19, 1745 Ubutyebi bakhe wabushiyela amahlwempu. Umzi wakhe uphumle kwiCathedral yaseSt.Patrick eDublin.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Uhambo lukaGulliver